कम्पनीको सीइओ भन्दै युवकले बनाए प्रेमिका, होटलमा भेट्न पुग्दा होस उड्यो ! – Online Khabar 24
कम्पनीको सीइओ भन्दै युवकले बनाए प्रेमिका, होटलमा भेट्न पुग्दा होस उड्यो !
November 5, 2021 by admin admin
काठमाडौं। एक यौ’ कर्मी महिलाले एउटै ग्राहकसँग ४० करोड रुपैयाँ लुटेकी छिन् ।
धनी व्यक्तिहरुलाई फ’साउने धन्दा गर्ने यी महिलाले ६८ वर्षका एक व्यक्तिसँग यति ठूलो रकम ठ’गी गरेकी हुन् ।
महिलाले आफूलाई एक कम्पनीको सीइओ बताएकी थिइन् । तर, जाँचमा जे खु’लासा भयो त्यसबाट पी’डि’त वृ’द्धको होस उ’डेको छ । महिलाले धनीहरुलाई आफ्नो शि’कार बनाएर ठ’गी गर्थिन् । अनलाइनबाट ठगी गरेर उनले निकै पैसा कमाएकी थिइन् ।
द सनको एक रिपोर्टअनुसार ३४ वर्षकी यौ’क’र्मी महिला लुइस क्यापलनले ६८ वर्षका एक व्यक्तिसँग अनलाइनमार्फत मित्रता गरेकी थिइन् । क्यापलन प्रायः विभिन्न धनी व्यक्तिहरुसँग होटलमा गइरहन्थिन् । पी’डित व्यक्तिलाई यो कुराको पटक्कै अनुमान सम्म पनि थिएन कि क्यापलन कसरी मा’निसहरुलाई आफ्नो जा’लमा फ’सा’एर ठगी गर्छिन् ।
एक दिन लुइस क्यापलन ती वृद्धसँग भेट्नको लागि होटलमा गइन् । त्यहाँ उनले ती व्यक्तिलाई आफ्नो जालमा फसाइन् । दुई देखि तीन पटकको भेटघाटमै उनले ती व्यक्तिबाट एक मिलियन पाउण्ड (साढे १६ करोड रुपैयाँ) हा’त पारिन् । तर, यत्तिले पनि महिलाको लो’भको भाँ’डो भरिएन ।
क्यापलनले ती वृद्धसँग दुबइ र डबलिनमा रहेको व्यवसायको लागि भनेर २.५ मिलियन पाउण्ड (४० करोड रुपैयाँ) हात पारिन् । जबकि यी दुवै ठाउँमा महिलाको कुनै व्यवसाय थिएन । तर, यही बीचमा ती पी’डि’तलाई आफू ठगि’एको आ’शं’का भयो र उनले पु’लिसलाई जानकारी दिए ।
पुलिस जाँचमा महिला पेशेवर धो’केबाज भएको खु’लासा भयो । केस दर्ता गरेर उनलाई अ’दालतमा पेश गरियो । अदालतले केपलनलाई दो’षी ठ’हर गरेको छ र उनलाई ७ वर्षसम्म जे’ल स’जाय हुन सक्छ ।
उनले सामाजिक संजालमा कैयौं प्रोफाइल बनाएर राखेकी थिइन् । यी प्रोफाइनलमा उनले आफ्ना सुन्दर तस्वीरहरु राखेकी थिइन् । कुनै प्रोफाइलमा उनले आफूलाई फेशन डिजाइनर, कुनैमा कम्पनीको सीइओ भएको दावी गर्थिन् । जबकि वास्तविकतामा उनी यौ’ व्यवसायी र ठ’ग थिइन् । यो खबर साभार गरियको हो । फाइल तस्विर
Prevछोराले गरे बाबुको ह’त्या, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ !
next‘धुँवा आयो भन्दा सुरुमा वास्ता गरिनँ, एकैछिनमा परिवार सखाप भयो’